မြန်ဆန်သွက်လက်ပြီး မောင်းနှင်အားကောင်းမွန်သည့် Yanmar ST-A1 လက်တွန်းထွန်စက်
Yanmar လက်တွန်းထွန်စက် ST-A1 ကို မြန်မာလယ်သမားများ၏ လိုအပ်ချက်များပြည့်မှီရန်ပုံစံထုတ်လုပ်ထားသည်။ ST-A1 ၏မြန်ဆန်သွက်လက်မှု၊မောင်းနှင်အားကောင်းမှု၊စိတ်ချရမှုတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေသအားလုံးတွင်ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာများကိုယ် တိုင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
၁. အချက်အလက် နံပါတ် (၁)ခြောက်သွေ့သောကလပ်ပြားများစနစ်
၂. အချက်အလက် နံပါတ် (၂) အရည်အသွေးမြင့်သော ဘယ်ရာရင်
အရည်အသွေးမြင့်သော ဘောဘယ်ယာရင်ကို သုံးစွဲထားသောကြောင့် ခိုင်ခန့်ခြင်း၊ကြာရှည်စွာ အသုံးခံခြင်း၊ပျက်စီးမှုနည်းပါးခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါသည်။ထိုဘောဘယ်ယာရင်သည် စက်၏ဝင်ရိုးကို ကာလကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။
၃. အချက်အလက် နံပါတ် (၃) FCD အထူးသွန်းလုပ်ထားသောသံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော
နေရာဒေသအားလုံးရှိ ပြင်းထန်ခက်ခဲသော အလုပ်များအတွက် အသင့်ရှိနေသောဂီယာအုံဖြစ်သည်။စံချိန်မြင့်မားသော သံမဏိ(မိုလောင်းစနစ်) ကိုအခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့်တောင့်တင်းခိုင်မာခြင်း၊ အရွယ်အစားကြီးခြင်း၊စိတ်ချစွာအသုံးခံခြင်းစသည့် အချက်များရရှိသည်။
၄. အချက်အလက် နံပါတ် (၄) ဂီယာလေးချက်ပါသော စနစ်
အထူးပြုလုပ်ထားသော ဂီယာအပတ်ရေ အချိုးနှင့်အတူ ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ထွန်စက်၏ အများဆုံးအရှိန်ကို ၂၄.၂ ကီလိုမီတာ/နာရီနှုန်းရရှိသည်။ဂီယာအဆင့်တိုင်းတွင် ဂီယာပြောင်းနှုန်းမြန်ဆန်ပြီး အလုပ်ကိုလျှင်မြန်စွာပြီးမြောက်စေသည်။ကြီးမားသော ဂီယာအစုအဖွဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဘယ်ယာရင်တို့ကြောင့် ပြင်းထန်ခက်ခဲသော အလုပ်အမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဂီယာတပ်ဆင်မှု လွယ်ကူခြင်၊အသုံးပြုရအဆင်ပြေခြင်း ဂီယာအရေအတွက်များပြားခြင်းစသည့် အခြေအနေများသည် ST-A1 မော်ဒယ်ထွန်စ က် တစ်ခုတည်းတွင်သာရှိသည်။
၅. အချက်အလက် နံပါတ် (၅) ပါဝါအရင်းအမြစ် အင်ဂျင်
ST-A1 ထွန်စက်တွင် Yanmar TF120-Di တိုက်ရိုကပေါက်ကွဲ စနစ်သုံး အင်ဂျင်ဖြစ်သောကြောင့် ပါဝါထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရုန်းအားမြင့်မားသည် ။ တစ်နေ့လုံးစဉ်ဆက်မပြတ် ထွန်ယက်သော်လည်း ဒီဇယ်ဆီစားနှုန်းကို သက်သာစေပါသည်။
အကျယ် (အနည်းဆုံး/အများဆုံး) mm 1055-1205
အလျား mm 3030
အမြင့် mm 1217
ဂီယာ(၉၀)ဆီ (SAE Number 90)
အများဆုံး အမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ / နာရီ)
ဂီယာ (၁) 37 ; 1
ဂီယာ (၂) 20 ; 1
ဂီယာ (၃) 8 ; 1
နောက်ပြန်ဂီယာ 53 ; 1
hp 8.5-12* only with Yanmar Diesel Engine 8.5 and 9.0 hp with implements.
လက်တွန်းထွန်စက် ST-A1 မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ နှင့် ထောက်ပံ့ရေး
မူပိုငျခှငျ့ © YANMAR CO., LTD. မူပိုငျခှငျ့အားလုံးလကျဝယျပိုငျဆိုငျသညျ။